ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်တွေ ခိုလှုံရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စစ်တပ် ဝိုင်းထားလို့ ဒေသခံတွေပြော
ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်တွေ ခိုလှုံရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းက...
10 มิ.ย. 2562 - 19:30 น.
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှာ စစ်ဘေးရှောင်တွေ ခိုလှုံ နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းကို တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတစ်ခုကနေ ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ဝိုင်းထားတယ်လို့ ဒေသ ခံတွေ က ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်ကနေ ဝိုင်းထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် ပေါက်တောပြင် ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းထဲမှာ ကျေးရွာ ၈ ရွာက စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူ ၇၀၀ ကျော် ခန့် ခိုလှုံနေတဲ့္စခန်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံး အခြေအနေ ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကို စစ်တပ် က ဝိုင်းထားပြီး အထက် အမိန့်အရ ကျောင်း ကို စစ်ဆေး ဖို့ လာရောက် တာ ဖြစ်တယ်လို့ အဝိုင်းခံရတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် အရှင် အာရက္ခ က ဘီဘီစီ ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ဂျပန်အစိုးရက အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၇ ငွေကြေး ကူညီမယ်
ဒုက္ခသည် စခန်း တခု က စစ်ဘေးရှောင်များ
အဲဒီ ကျောင်းထဲ ကို စစ်ဝတ်စုံတွေ နဲ့ လာရောက် စစ်ဆေး တဲ့ အခါမှာ လူတွေ ကြောက်လန့်မှာ ကို စိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက် အရပ်ဝတ်အရပ်စား နဲ့ပဲ လာရောက် စစ်ဆေး ဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ ထားတယ်လို့ ဆရာတော် က ထပ်မံ မိန့်ဆိုပါတယ်။
စခန်းတာဝန်ရှိတဲ့ ရဟန်းတော်တွေကတော့ သေနတ်တွေနဲ့ဆိုရင် လူတွေ ကြောက်လန့်စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက် ဥပဒေနဲ့ အညီ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ ပြောဆို ထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့နောက်မှာ တပ်မတော်ကနေ အရပ်ဝတ်နဲ့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမယ်လို့ ပြောဆိုပေမယ့် ညနေပိုင်းထိ ကျောင်းထဲကို ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသေးဘဲ အပြင်ကဘဲ ဝိုင်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလို ဝိုင်းထားတဲ့ အတွက် ကျောက်တန်း ရွာ လို အဖြစ်မျိုး ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ် လာမှာ ကို စိုးရိမ် မိကြောင်း ကျောင်းဝန်း ထဲမှာ ရောက် နေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် အမျိုးသမီး တစ်ဉီး က ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် စစ်ဦးစီးပထမတန်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဂဃနဏ မသိရသေးကြောင်းနဲ့ ဒီဖြစ်စဉ် ကို စုံစမ်းပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်မထားဘူးလို့ တပ်မတော် တုံ့ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ခုလို စစ်ဆေးမှု အတွင်းမှာရော တိုက်ပွဲတွေ အတွင်းမှာပါ အရပ်သားတွေ သေဆုံးမှုက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးပွားနေပါတယ်။ အခုလို စစ်ဘေးရှောင် စခန်း တစ်ခုကို စစ်သားတွေက ဝိုင်းထားတာ ကြောင့် အများပြည်သူတွေကတော့ အထူး စိုးရိမ်လျက် ရှိနေကြတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်တွေ ခိုလှုံရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စစ်တပ် ဝိုင်းထားလို့ ဒေသခံတွေပြော